Ebla 15, 2017
Mormiin Oromiyaatti bara 2015 jalqabame gara oggaa tokkoo oliitii biyyaatti raasaa ture booda mootummaan Itoophiyaa Onkoloolssa 9, 2016 labsii yeroo attattamaa ji'a jaha turu labse. Dhiheenya kana immoo ji'a afuriin dheeresse.
Mootummaan jeequmsa ka'ee tasgabeesuu fi nagaha hawwaasaa eegsisuudha murtii kana irra gahuu dubbatus, dhaabbileen mirga dhala namaatii falmanii fi beektoonni baayyen mirga lammiilee ukkaamsuuf itti fayyadamaa jira jedhan.
Labsiin kun fooyyee fideeraa laata? Fundura biyyatiitti bu'aa buuse qabaa? Kana irratti fi walumaagalaa haala siyaasa fi diinagdee biyyattii irratti yaada hayyoonni biyya allaa oggoota dheeraa dha qorannoo geggeessaa turan kennan kunooti.
Renee Lefort: Labsiin Yeroo Atattamaa Haala Itoophiyaa Keessa Jiru Hin Fooyyeessine